Ikholamu kunye neposi-Morningstar Stone Co, Ltd.
Udonga oluChongiweyo lwe-3D kunye noBugcisa
Ifanitshala yeMarble-Itafile kunye noBugcisa
Ikholamu kunye neposi
Ukukhethwa kweMathiriyeli eluhlaza
Eli nyathelo libalulekile kwaye libalulekile kuwo onke amanyathelo alandelayo. Iibhloko zetyhubhu zamatye kunye namatye ahanjiswayo asasazwa ngokubanzi izinto ezilungele ukulungiswa. Ukukhethwa kwezinto kuya kufuna ulwazi olucwangcisiweyo lwabalinganiswa bezinto kunye nokusetyenziswa kunye nengqondo ekulungeleyo ukufunda nayiphi na into entsha. Ukuhlolwa okuneenkcukacha kwezinto ezibonakalayo kubandakanya: ukurekhodwa kwemilinganiselo kunye nokujonga imbonakalo yomzimba. Yinkqubo yokhetho kuphela eyenziweyo ngokuchanekileyo, imveliso yokugqibela inokutyhila ubungakanani bayo kunye nexabiso lesicelo. Iqela lethu lokuthenga, lilandela inkcubeko yenkampani yokuvelisa iimveliso ezisemgangathweni kuphela, lilunge kakhulu ekufumaneni nasekuthengeni izinto ezisemgangathweni ophezulu. ▼
Ukucaciswa komzobo wevenkile / uyilo
Iqela elinobuchule elinokusebenzisa iintlobo ezahlukeneyo zokuzoba isoftware ngolwazi oluyimfuneko lokwenziwa lisahlula kwabanye abakhuphisana nathi. Sisoloko sikulungele ukubonelela ngezisombululo ezizezona zilunge ngakumbi kulo naluphi na uyilo kunye nemibono. ▼
Umsebenzi wesandla kunye noomatshini bayancedisana. Oomatshini benza imigca ecocekileyo kunye nobuhle bejiyometri, ngelixa izixhobo ezenziwe ngesandla zinokungena nzulu kubume obungaqhelekanga kunye nokuvela ngaphezulu. Nangona uninzi loyilo lunokufezekiswa ngoomatshini, inyathelo lezandla zomsebenzi liyimfuneko ekunikeni imveliso ukutya okucokisekileyo kunye nokucokiswa. Kwaye kuyilo oluthile lobugcisa kunye nemveliso, i-handcraft isacetyiswa. ▼
Sinecandelo lokupakisha elikhethekileyo. Ngesitokhwe esiqhelekileyo somthi kunye nebhodi yeplywood kwifektri yethu, siyakwazi ukwenza ngokwezifiso ukupakisha kuhlobo ngalunye lweemveliso, nokuba zisemgangathweni okanye aziqhelekanga. Ukupakisha kwabasebenzi kwimveliso nganye ngokujonga: umthwalo olinganiselweyo wokupakisha nganye; ukuba anti-skid, anti-ukungqubana & shockproof, manzi. Ukupakisha okukhuselekileyo kunye nobuchwephesha sisiqinisekiso sogqithiso olukhuselekileyo lwemveliso egqityiweyo kubathengi. ▼
Igumbi 1103, Ukwakha B, Hengyuan Elite Mansion 1985, Mupu Road 101, Huli District, Xiamen, China